Mee Blog Traffic na eCourse na Adreesị Abụọ | Martech Zone
Na Tọzdee, Septemba 15, 2009 Sunday, June 1, 2014 Bọọlụ Lorraine
Anọwo m na-agbagharị n'echiche nke ịnye eCourse n'efu maka ọnwa ole na ole. Mmụọ nsọ maka echiche a bụ nsonaazụ nke mbụ nke ProBlogger - Otu esi ewu ụlọ kacha mma na ụbọchị 31. (Ọ bụ eCourse n'efu, ugbu a ọ bụ a book)
Echiche mbụ dị mma: Debanye aha, nweta ozi-e, jikọọ na post blọgụ, kwuo, sonye na nnọkọ, gụọ nkọwa ndị ọzọ, nweta ọrụ, kesaa ihe ị mụtara, usoro ahụ wee malite ọzọ.
Echere m na ọ bụ ụzọ dị mma iji mee ndị na-agụ akwụkwọ, gosipụta ihe m maara, bulie ahịa akwụkwọ ole na ole, yana ikekwe onye ahịa n'ụzọ. Site na mwepụta nke weebụsaịtị ọhụrụ anyị n'azụ anyị, adị m njikere ịmalite.
Onye na - ahụ maka ọrụ ịkpọtụrụ anyị mgbe niile, enwere m mmechuihu ịchọpụta na m nwere ike mepụta mmadụ iri na ise na - aza onwe ha, mana naanị na - arụsi ọrụ ike ọ bụla 15 (Nke ahụ anaghị arụ ọrụ nke ọma maka onye na-eme atụmatụ a Iri Izu course)
Ya mere, ịchụ nta malitere maka ego ọzọ, ọnụ bara uru. Obi dị m ụtọ ịchọta, mepụtara na mpaghara Adreesị Abụọ ugbu a na-enye ọrụ mkpọsa. N'agbanyeghị na Beta, enweela ihe ole na ole, mana onye nrụpụta, Nick Carter anaghị ehi ụra. A na-aza arịrịọ m, ajụjụ, na ọbụnadị mkpesa nke oge ụfọdụ, ma dozie, ọtụtụ mgbe tupu m abanye ọzọ.
Kedu ihe bụ AddressTwo? Azịza ya dị nkenke: Ngwá ọrụ CRM dị mfe, maka onye na-ezughị ezu maka Goldmine, ma ọ bụ Salesforce. Site n'enyemaka nke ngwa ọrụ mkpọsa, enwere m akara nke ozi-e 10, edepụtara ka a ga-enyefe anyị otu ugboro n'izu. Ejikọtara email ọ bụla na post blog.
Dika ndi mmadu ohuru na-ebuputa atumatu azụmaahịa a na-agbakwunye ha na otu ohuru, wee bido ịnata usoro ahụ. Enwere m ike inwe ọtụtụ mmadụ ma ọ bụ otu dị iche iche na-eto site na mmemme ahụ, ha niile na ọkwa dị iche iche.
Kedu ka o si arụ ọrụ ugbu a? Ebe ọ bụ na ezigara m akwụkwọ ịkpọ oku mbụ na ihe ndị ọzọ gara aga, enwere m ihe dị ka mmadụ iri isii debanyere aha n’otu n’ime ụzọ anọ. M ga-ahụ ahịa ọzọ? Nke ahụ bụ atụmatụ ahụ, mana mana ugbu a, enwere m ndị 60 a na-akpọ oku ịlaghachi na weebụsaịtị m maka ọdịnaya ọhụụ kwa izu, ihe dịka 60/1 n'ime ha na-eme nloghachi ahụ.
Enwere ọtụtụ ngwa maka ụdị mkpọsa a, ọ bụrụ na anyị nwere ike ị nweta ahụhụ niile ahụ, anyị ga-anwale ya na ndị ahịa ole na ole.
Gịnị bụ CRM?
Ọ bụrụ n ’ị chọrọ ịmata ihe ngwugwu Mmekọrịta Ndị Ahịa (CRM) na-eme, AddressTwo arụla nnukwu ọrụ nke ide akwụkwọ kedu ihe CRM bụ na vidiyo a:
Tags: tụlee abụọaddresstwoCRMnjikwa mmekọrịta ndị ahịaụdọNwunyeihe ọmụmụ weebụ
Mara ihe zuru oke iji chọta azịza ya
Sep 15, 2009 na 8:44 PM
Kedu ihe dị mma ịchọta… na ebe a na Silicorn Valley!